Shanta Isbeddellada Dijitaalka Ah Ee Ruxaya Yurub | Martech Zone
Shanta Isbeddellada Dijitaalka ah ee ruxaya Yurub
Khamiis, May 23, 2013 Douglas Karr
Xog weyn, kanaal fara badan, moobiil iyo baraha bulshada ayaa dhammaantood saameyn ku leh dabeecadaha wax iibsashada ee internetka. Inkasta oo sawirradan ay diiradda saarayaan Yurub, ayaa adduunka intiisa kale aad ugama duwana. Xogta weyni waxay caawineysaa bixiyeyaasha e-commerce inay saadaaliyaan dabeecadda wax iibsiga iyo inay gacan ka geystaan ​​soo bandhigida waxsoosaarka dhammaan kanaallada - kordhinta sicirka beddelaadda iyo kor u qaadista macaamiisha.
Iftiiminta sahanka 'McKinsey iConsumer' 5 isbedelada isticmaalka dhijitaalka ah ee muhiimka ah ee ganacsiga elektarooniga ah, mobilada, multichannel, warbaahinta bulshada, iyo xog weyn.
Qeybta adag, dabcan, ma ahan sida fudud shirkadaha sida ay uga faa'iideystaan ​​xogta weyn iyo sida ay ugu suuq geynayaan kanaallada oo dhan, waxay xisaabineysaa saameynta kanaal kasta oo suuq geynaya iibka guud. Shirkadaha waaweyni waxay adeegsanayaan saadaalin Analytics uruuriya tiro xog ah oo u oggolaanaysa iyaga inay fahmaan waxa ku soo kordha ama hoos u dhaca ku yimaada hal kanaal wax qabadkiisu wuxuu yeelan doonaa dhammaan qaybaha oo dhan. Shirkadaha yar yar ayaa wali ku haray taabashada ugu horeysa, farsamooyinka ugu dambeeya ee la taabto kuwaas oo laga yaabo inaysan bixin aragti iyo saxnaanta waddooyinka ay dabeecadaha macaamiisha adag ay hadda qaadanayaan.
Tags: xog weynisticmaalka digitalyurubMcKinseyMcKinsey & Shirkaddaganacsiga gacantamulti-channelsuuq geyn farabadanganacsiga bulshada
Taabashada Koowaad, Taabasho Dambe, Taabasho Badan
Jun 2, 2013 saacadu markay ahayd 8:38 AM
Tilmaanta ayaa ah mid aad u fiican, waxaan gebi ahaanba ku raacsanahay in maalgashi badan aan ku sameeyo nidaamka wax iibsiga ee internetka isla markaana aan ku daro xog dheeri ah oo ku saabsan boggaga internetka, macaamiisha iyo iibku si weyn ayey u kordhi doonaan